Posted by ရဲဝင်..ဖြိုး at 3:40 AM
Posted by ရဲဝင်..ဖြိုး at 3:25 AM
ချိုကို | ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၄၉ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလအတွင်းက ချထားပေးခဲ့သော MEC အမှတ်တံဆိပ် စီဒီအမ်အေ ၈၀၀ မဂ္ဂါဟဇ် ဖုန်းများ ကဒ်ပျောက်၊ ကဒ်ပျက်သည့် အရေအတွက်များလာ၍ ကဒ်အသစ် ပြန်လည်လျှောက်ထားရာတွင် တစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ စာတိုက်ကြီး၊ ဆက်သွယ်ရေး မန်နေဂျာရုံးရှိ ဖုန်းကဒ်ပျက်၊
ပျောက်မှုများကို ကတ်အသစ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ယူထားသော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း တစ်ဦးက
ကျပ် ၁၅ဝဝ တန်ဖုန်းများကို တစ်လလျှင် အလုံးရေ သုံးသိန်းခွဲဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ချထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - ဘိုဘို)
စာတိုက်ကြီး၊ ဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာရုံးရှိ အဆိုပါ ၀န်ထမ်းက `အရင်က ဖုန်းကဒ်ပျက်တာတွေကို နေ့ချင်းပြီး ထုတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဖုန်းကဒ်ပျက်လို့ဆိုပြီး လာလျှောက်တဲ့ သူတွေက အရမ်းများလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ MEC ကုမ္မဏီဘက်ကနေ စစ်ဆေး ကြည့်တဲ့ အခါ အမှတ်တကယ် ဖုန်းကဒ်မပျက်ဘဲ လာလျှောက်တာတွေ
တွေ့နေရတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဖုန်းကဒ်ပျက် လာလျှောက်တဲ့ ကဒ်တွေကို MEC ဘက်ကနေ သေချာပြန်လည် စိစစ်ပေးပြီး အမှန်တကယ်ပျက်မှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး စစ်ဆေးနေလို့ တစ်ပါတ်ကြာမြင့်ရတာပါ´ဟု
လက်ရှိတွင် ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဖုန်းကဒ် ပျောက်ခြင်းကို ကျပ်နှစ်သောင်းဖြင့် အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ကာ သုံးရက်ခန့်သာ ကြာမြင့်ပြီး ဖုန်းကဒ်ပျက်မှုကိုမှု အခကြေးငွေ ပြန်လည်ကောက်ခံခြင်း မရှိဘဲ ဖုန်းကဒ်သစ်
ယင်း ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်များကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က စတင်ချထားပေးခြင်း
ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တစ်လလျှင် အလုံးရေ ၃၅၀၀၀၀ ချထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ရဲဝင်..ဖြိုး at 3:06 AM
Posted by ရဲဝင်..ဖြိုး at 3:04 AM
ပထမဦးစွာ ကဒ်ချိုးပြီး 800Mhz ဟန်းဆက်အတွင်းထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လိုင်းပေါ်လာအောင် စောင့်ပါ။ လိုင်းတက်လာပြီဆိုလျှင် မိမိနီးစပ်ရာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ခေါ်လိုက်ပါ။ လိုင်းမဝင်သော တီတီတီ အသံကြားလျှင် ပြန်ချလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ခေါ်ပါ။
ပြီးလျှင် ပြန်ချထားလိုက်ပြီး ခေတ္တစောင့်လိုက်ပါ။
အဆိုပါ ၁၅၀၀တန် ဆင်းကဒ် ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ
ဖုန်းမန်နေဂျာရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟု ကြေညာထားပါသည်။အဝင်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်
ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မည် ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် သုံးစွဲမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၄ကျပ်ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး မကြာမီကာလတွင် အင်တာနက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Posted by ရဲဝင်..ဖြိုး at 3:03 AM
1500 တန်ဖုန်း internet setting
Name - ထည့်ချင်တာထည့်
Proxy - မထည့်နဲ့ 
Port - မထည့်နဲ့ 
username - mectel@c800.mm
Server - မထည့်နဲ့ 
MMSC - မထည့်နဲ့ 
MMS Proxy - မထည့်နဲ့ 
MMS Port - မထည့်နဲ့ 
MMC - 414
APN type - *(*
Posted by ရဲဝင်..ဖြိုး at 2:58 AM
MM Flashsong သို.
သီချင်းစာမျက်နှာ ၅ Posted by ...
သီချင်းစာမျက်နှာ ၁ Posted by
သီချင်းစာမျက်နှာ ၂ Posted by
Flash Song Album များ Posted by
သီချင်းစာမျက်နှာ ၄ Posted by Thurainlin at 07:33 Email This BlogThis! Share to Twi...
၁၅၀၀ တန်ဖုန်း ကဒ်ပျက်လျှောက်သည့် အရေအတွက်များလာ၍ တစ်ပတ်ကြာမှ ကတ်ပြန်ရမည် ချိုကို | ကြာသပတေးနေ့၊ မေလ...
၁၅၀၀ တန်ဖုန်း ကဒ်ပျက်လျှောက်သည့် အရေအတွက်များလာ၍...
ဆုဝတီ. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.